Tirada uu soo ritay cudurka Coronovirus dalka Maraykanka oo gaartay 4 malyan oo ruux | Jowhar Somali news Leader
Home News Tirada uu soo ritay cudurka Coronovirus dalka Maraykanka oo gaartay 4 malyan...
Tirada uu soo ritay cudurka Coronovirus dalka Maraykanka oo gaartay 4 malyan oo ruux
Tirada uu ku dhacay cudurka Coronavirus ee dalka Maraykanka ayaa gaartay afar malyan oo ruux Khamiistii shalay ahayd iyadoo intooda badan dadkaasina ay ku nool yihiin gobolada Koofurta iyo Galbeedka Maraykanka.
Maraykanka ayaa ah dalka ugu badan ee uu cudurkan safmarka ah uu saameynta weyn ku yeeshay iyadoo ay gaarayaan dadka u dhintey 143,800 oo ruux sida laga soo xigtey jaamacada Johns Hopkins oo diiwaangelisa waxyeelada cudurka Covid-19.
Dhinaca kale Bangiga Horumarinta Afrika ayaa sheegay inuu siinayo lacag gargaar ah oo gaareysa $285 million wadamada Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger iyo Chad si ay uga caawiso la dagaalanka cudurka coronavirus.
Dalka Uganda ayaa qofkii haweeney ka shaqeyneysay caafimaadka waxa ay noqotay qofkii ugu horeeyay ee cudurkan ugu dhinta dalka Uganda,hase yeeshee dad ka badan kun ruux ayaa cudurkan laga helay.
Inkabadan 15 malyan oo ruux ayaa laga helay cudurkan guud ahaan caalamka, iyadoo ay ka bogsadeen illaa 8.6 million halka ay u dhinteen dad gaaraya 622,000 ruux.